Shina Sy Japana: Ny Adin’ny Sarimiaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2018 6:19 GMT
Nandefa ny fizarana miisa 36 amin'ilay sarimiaina 3 D “Ny Miaramila Devoly Ao Amin'ny Tendrombohitry Mao-er” (帽 兒 山 的 鬼子兵) tamin'ny volana Oktobra ny CCTV ao Shina nandritra ny fankalazana ny Fetim-pirenena. Novokarin'ny orinasa iray any Heilongjiang ilay sarimiaina ary nofidin'ny birao nasionalin'ny haino aman-jery tao amin'ny faritra Dongbei (Avaratra atsinanan'i Shina) ho anisan'ny famokarana sarimiaina tsara indrindra nandritra ny taona (jereo ny famoahan-gazety ny 30 Septambra 2006).
Nalaina avy amin'ny tantara tany amin'ny taompolo 1930 -40 (nandritra ny Ady Lehibe Faharoa) ity sarimiaina ity, tao amin'ny tanànakely iray akaikin'ny tendrombohitra (Mao-er) any Heilongjiang. Miresaka momba ny fifandraisana nisy teo amin'ny ankizy Shinoa miisa 3 sy ny miaramila Japoney miisa 5 ny tantara.
Nilaza ilay mpanoratra tantara foronina Shinoa Han Song (韓 松) fa maneho ny fomba fijery mahazatra ny Shinoa ny ijerena ireo miaramila Japoney ao anatin'ity sarimiaina ity ary mety hiteraka fanafintohinana ho an'ireo vahoaka Japoney an-tapitrisany izany.
Natao ho bado tokoa ireo Japoney miisa 5, ohatra, tsy manala ny vy fiarovan-dohany izy ireo rehefa misy ny kotro-baratra mirefotra ary miafina eo ambanin'ny hazo lehibe… mankafy ny fanararaotana ny hafa izy ireo ary tenda-kanina, ka tratran'ny fandrika ataon'ireo ankizy hatrany noho izany…
Any amin'ny faran'ilay sarimiaina, toy izao ny tononkiran'ilay hira:
Mandrangitra ireo miaramila devoly aho
Mampijaly amin'ny hafetsifetsena ireo miaramila devoly aho
Sady milalao aho no mandrangitra, miaraka amin'ny totohondry sy ny daka
Maneso / mampijaly ireo miaramila devoly mandra-matiny aho !
Nahoana no naseho nandritra ny volana fankalazana ny fetim-pirenena ity sarimiaina ity ? Satria manomana ny lalao Olaimpika ve ny firenena?
Angamba, ho an'ny valifaty tamin'ny fanesoesoana ny tantara Shinoa, “Lapa Mena” izany (jereo ny andevo ara-nofon'ny Lapa Mena an'ny ESWN ). Na izany aza, amin'ny ambaratonga roa samihafa no isehoan'ireo fanesoesoana roa ireo satria mitsikera ireo “mpanafika” isika amin'izao fotoana izao ary tohanan'ny CCTV. Ary nisafidy ny sarimiaina ho anisan'ireo famokarana nasionaly tsara indrindra ny Birao Nasionalin'ny Haino Aman-jery sy nanolotra izany ho an'ny ankizy rehetra ao Shina. Nahoana no tsy nanao fanamarihana ny Departemanta Diplaomatika.
Tsy mbola nisy loatra ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny tontolon'ny bilaogy Shinoa kanefa namerina namoaka ny fanehoan-kevitra nosoratan'i Rui Cheng Gang (芮成剛), mpanolotra fandaharana iraisam-pirenena ao amin'ny CCTV i Xu Xiaoping (徐小平) izy izay nanoro hevitra ny Shinoa tsirairay, indrindra fa ny tanora, mba hamaky bebe kokoa momba an'i Japana (zh).
Raha tsy mbola tany Shina mihitsy ny Amerikana iray ary tsy manana namana Shinoa, dia hahatsapa zavatra hafahafa avy amin'ny fampitam-baovao izy ary hilaza fa ratsy i Shina. Tsy afa-manaiky izany aho. Fa hoy kosa aho hoe: tsy manan-jo hiteny izany ianao raha tsy misy ny fanadihadiana. Tsy mahalala na inona na inona momba an'i Shina ianao, ahoana no ahafahanao mitsara azy toy izany?
Ahoana ny amintsika? Tena mahalala tsara ny momba an'i Japana ve isika?